Karenni National Women's Organization – EMPOWERMENT • PEACE • ADVOCACY
On February 23, 2016 February 9, 2017 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
Statement on Karenni National Women Organisation’s 28th Anniversary 10.3.2021
On April 20, 2021 By Karenni National Women's Organization
The Karenni National Women’s Organisation (KNWO) was founded in the Karenni refugee camp along the Thai-Myanmar border on 10 March 1993 withavision for women and girls in the refugee camps and in Karenni State to enjoy freedom of choice, equal political, economic, and social rights and to be free from any form of violence.Along our 28-year journey, we have been working with women, girls and children on protection, empowerment, peace and security issues as well as access to justice and resettlement for survivors of gender-based violence. We have also documented human right violations by the Burmese military. We have recorded many cases of impunity, where victims and survivors remain unable to access pathways to justice.Furthermore, the military coup on 1 February 2021 resulted in women and girls in rural and urban areas of Karenni State feeling physically and mentally unsafe. The State Administration Council has brutally cracked down on the peaceful protestors and committed crimes including torture, sexual harassment and assault, and gender- based violence. KNWO condemns the unlawful situation taking place in Karenni State and throughout Burma as peaceful protestors including women and youth are targeted.On this day of our 28th anniversary, we declare that we will fight to end the military dictatorship until the end. We stand with the people in Myanmar and echo the following demands:1. End the military dictatorship2. Abolish the 2008 constitution3. EstablishaFederal Democracy4. Release all the political prisonersMedia Contact
Maw Noh Myar +66 9868 916 94
Mu Ree +66 9322 600 15
ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးတည်ထောင်ခြင်း (၂၈) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားမှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၁၀) ရက်ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းနှင့်ကရင်နီ (ကယား) ပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှု ရေးတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ခံစားရရှိပြီး နည်းမျိုးစုံဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုများမှ လွတ်မြောက်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး၁၉၉၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ပြီး (၂၈) နှစ်တာကာလအတွင်း မိမိတို့ပြည်နယ်နှင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းရှိအမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စွမ်းရည်မြင့်တင် ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊ လိင်ကွဲပြားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောအကြမ်းဖက်မှုများတွင် နစ်နာသူများ၊ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သောသူများအတွက် တရားမျှတရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက် အစဉ်တ စိုက် လုပ်ဆာင်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးသည် ကရင်နီ (ကယား) ပြည်နယ်အတွင်းမှ အမျိုးသမီးများအပေါ် စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်သောအကြမ်းဖက်မှုများကို မှတ် တမ်းတင်လျက်ရှိပြီး စစ်တပ်မှကျူးလွန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများသည် အပြစ်ပေးအရေးယူမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေပြီး အကြမ်းဖက်ခံရသူများ၊ ရှင်သန်လွတ်မြောက်သူများအတွက်တရားမျှတမှုများယနေ့အထိ မရရှိသေးပေ။ ထို့ပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ စစ်တပ်မှ မတရားစစ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကရင်နီပြည်နယ် မြို့ပြ ကျေးလက်ဒေသများမှ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် ကလေးငယ်များသည် နေ့စဉ်ရက်ဆက် မလုံခြုံမှုများကို ခံစားနေရပါသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ တနိုင်ငံလုံးရှိလက်နက်မဲ့ပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုများ၊ ကာယိအိနြေ္ဒပျက်ပြားစေခြင်းများနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကို ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းစွာကျူးလွန်နေသည့်အပြင် မိမိတုိ့ ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးဆန္ဒပြနေသော အမျိုးသမီးထုနှင့် လူငယ်ထုများအပါအ၀င် ပြည်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့်အပေါ် မိမိတို့ ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်စွာရှုံ့ချပါသည်။မိမိတို့ ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးတည်ထောင်ခြင်း (၂၈) နှစ်ပြည့်သောအခါသမယတွင် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် တနိုင်ငံလုံးမှ ပြည်သူများနှင့်အတူ(၁) အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး(၂) ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး(၃) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေး(၄) မတရားဖမ်းဆီးခံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွှတ်ပေးရေး စသည့် ရပ်တည်ချက်များအတိုင်း ရပ်တည်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို အဆုံးတိုင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်းကြေညာအပ်ပါသည်။
မော်နိုမြာ +66 9868 916 94
မူရီး +66 9322 600 15
On September 12, 2018 September 12, 2018 By Karenni National Women's Organization
On August 2, 2018 August 3, 2018 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
On April 3, 2018 By Karenni National Women's Organization
On March 13, 2018 March 13, 2018 By Karenni National Women's Organization1 Comment
On October 5, 2016 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
On September 26, 2016 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
On September 21, 2016 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
On September 14, 2016 September 15, 2016 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment
On August 30, 2016 By Karenni National Women's OrganizationLeaveacomment